Ahụhụ Niile Ga-akwụsị n’Oge Na-adịghị Anya
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Olee otú obi ga-adị gị ma a sị na o nwekwaghị onye na-ata ahụhụ n’ụwa, e nweghịkwa mpụ, agha, ọrịa, na ọdachi ndị na-emere onwe ha? Weregodị ya na ụbọchị ọ bụla i tetara n’ụra, obi agaghị ekoro gị n’elu n’ihi na ị ma na ihe ị ga-eri agaghị akọ gị, marakwa na o nweghị onye ga-emegbu gị ma ọ bụ kpọọ gị asị. Ma, ihe a niile ọ̀ dị gị ka ihe na-enweghị ike ime eme? Nke bụ́ eziokwu bụ na o nweghị mmadụ ma ọ bụ òtù ọ bụla ga-emeli ihe ndị a. Ma, Chineke ekwela nkwa na ya ga-ewepụ ihe niile na-akpatara ndị mmadụ ahụhụ, ma ihe niile ahụ e kwuru okwu ha n’isiokwu bu nke a ụzọ. Lee nkwa ndị Chineke kwere n’Okwu ya, bụ́ Baịbụl:
A GA-ENWE EZIGBO ỌCHỊCHỊ
“Chineke nke eluigwe ga-eme ka otu alaeze nke a na-agaghị ebibi ebibi malite ịchị. A gaghịkwa enyefe ndị ọ bụla ọzọ alaeze ahụ. Ọ ga-egwepịa alaeze ndị a niile, mee ka ha ghara ịdịkwa, ma ya onwe ya ga-adịru mgbe ebighị ebi.”—Daniel 2:44.
Alaeze Chineke bụ ọchịchị Chineke nke ga-esi n’eluigwe na-achị. Ọ bụ Jizọs Kraịst ka Chineke họpụtara ka ọ bụrụ eze Alaeze a. Ọ ga-anọchikwa ndị ọchịchị niile e nwere n’ụwa, meekwa ka uche Chineke mezuo ma n’eluigwe ma n’ụwa. (Matiu 6:9, 10) Ọchịchị ụmụ mmadụ agaghị anọchi ọchịchị a n’ihi na ọ bụ ‘alaeze ebighị ebi nke Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị bụ́ Jizọs Kraịst.’ Alaeze Chineke ga-eme ka e nwee udo n’ụwa ruo mgbe ebighi ebi.—2 Pita 1:11.
OKPUKPE ỤGHA AGAKWAGHỊ ADỊ
‘Setan na-eme onwe ya ka o yie mmụọ ozi nke ìhè. Ya mere, ọ bụghị oké ihe ma ọ bụrụ na ndị ozi ya na-eme onwe ha ka ha yie ndị ozi nke ezi omume. Ma ọgwụgwụ ha ga-abụ dị ka ọrụ ha si dị.’—2 Ndị Kọrịnt 11:14, 15.
A ga-eme ka o doo onye ukwu na onye nta anya na okpukpe ụgha bụ ngwá ọrụ Ekwensu, meekwa ka okpukpe niile na-akpata ịkpọasị ma na-eme ka ndị mmadụ na-egburịta ibe ha gharazie ịdị. Nke a ga-eme ka ndị niile hụrụ “ezi Chineke” n’anya nwee “otu okwukwe” ma na-efe ya “n’ime mmụọ na n’eziokwu.” Nke a ga-emekwa ka udo dịrị n’ụwa, ndị mmadụ adịrịkwa n’otu.—1 Ndị Tesalonaịka 1:9; Ndị Efesọs 4:5; Jọn 4:23.
MMADỤ NIILE GA-EZU OKÈ
“Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ. Ihe mbụ niile agabigawo.”—Mkpughe 21:3, 4.
Jehova Chineke ga-eme ka ihe a Baịbụl kwuru mezuo n’ihi ọnwụ Ọkpara ya, bụ́ Jizọs, nwụụrụ ụmụ mmadụ. (Jọn 3:16) Mgbe Jizọs ga-achịwa ụwa, a ga-eme ka ụmụ mmadụ zuo okè. Ụmụ mmadụ agakwaghị ata ahụhụ ọ bụla n’ihi na “Chineke n’onwe ya ga-anọnyekwara ha” ma hichapụ “anya mmiri niile n’anya ha.” N’oge na-adịghị anya, ahụhụ niile ndị mmadụ na-ata ga-akwụsị. Ụmụ mmadụ ga-ezukwa okè n’ihi na “ndị ezi omume ga-enweta ụwa, ha ga-ebikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 37:29.
NDỊ MMỤỌ ỌJỌỌ AGAKWAGHỊ ANỌ
“[Jizọs Kraịst] wee jide dragọn ahụ, bụ́ agwọ mbụ ahụ, onye bụ́ Ekwensu na Setan, wee kee ya agbụ ruo otu puku afọ. Ọ tụbakwara ya n’ime abis ahụ, mechie ya ma kaa ya akara mgbe ọ tụbasịrị ya, ka o wee ghara iduhie mba niile ọzọ.”—Mkpughe 20:2, 3.
Ike niile Setan na-akpa ga-akwụsị mgbe a ga-ejide ya na ndị mmụọ ọjọọ ya, kee ha agbụ ma tụba ha n’ime “abis.” Nke a pụtara na ha agakwaghị akpa ike ọ bụla. Ha agakwaghị na-etinye aka n’ihe ụmụ mmadụ na-eme. Ụmụ mmadụ ga-ekuru ume ndụ n’ụwa mgbe Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya na-agakwaghị anọ.
‘OGE IKPEAZỤ A’ GA-AGWỤ
‘Oge ikpeazụ a’ ga-agwụ mgbe e nwechara ihe Jizọs kpọrọ “oké mkpagbu.” Jizọs sịrị: “Mgbe ahụ ka a ga-enwe oké mkpagbu nke a na-enwetụbeghị ụdị ya kemgbe ụwa malitere ruo ugbu a, ee e, a gaghị enwekwa ya ọzọ.”—Matiu 24:21.
Mkpagbu ahụ ga-abụ oké mkpagbu n’ihi na n’oge ahụ, a ga-enwe ụdị nsogbu ndị a na-enwetụbeghị n’ụwa. Oké mkpagbu ahụ ga-akwụsị n’oge a ga-alụ ‘agha nke oké ụbọchị Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.’ Aha ọtụtụ ndị na-akpọ agha a bụ Amagedọn.—Mkpughe 16:14, 16.
Ndị nọ n’ebe niile n’ụwa, bụ́ ndị ihe ọma na-adị mma, na-atụ anya oge Chineke ga-ebibi ụwa ọjọọ a. Ka anyị leba anya n’ihe ọma a ga-emere ha mgbe Alaeze Chineke ga-achịwa ụwa a.
CHINEKE GA-EMERE ANYỊ ỌTỤTỤ IHE ỌMA
“Oké ìgwè mmadụ” ga-anọ ndụ mgbe udo ga-adị n’ebe niile n’ụwa: Baịbụl kwuru na e nwere “oké ìgwè mmadụ” a na-amaghị ole ha dị, bụ́ ndị ga-esi “n’oké mkpagbu ahụ pụta” ma banye n’ụwa ọhụrụ nke ezi omume. (Mkpughe 7:9, 10, 14; 2 Pita 3:13) Ha ga-ekwu na nzọpụta ha si n’aka Jizọs Kraịst, onye bụ́ “Nwa Atụrụ Chineke nke na-ewepụ mmehie nke ụwa.”—Jọn 1:29.
Ihe Chineke ga-akụziri ụmụ mmadụ ga-abara ha ezigbo uru: N’ụwa ọhụrụ, “ihe ọmụma Jehova ga-ejupụta ụwa.” (Aịzaya 11:9) Ihe ndị so n’ihe Chineke ga-akụziri ụmụ mmadụ bụ otú ha na ibe ha ga-esi na-ebi n’udo ma na-elekọta ụwa. Chineke kwuru, sị: “Mụ onwe m, Jehova, bụ Chineke gị, Onye na-akụziri gị otú ị ga-esi baara onwe gị uru, Onye na-eme ka i jee ije n’ụzọ i kwesịrị iso.”—Aịzaya 48:17.
A ga-akpọlite ndị anyị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ n’ọnwụ: N’oge Jizọs nọ n’ụwa, ọ kpọlitere enyi ya Lazarọs n’ọnwụ. (Jọn 11:1, 5, 38-44) Ihe a o mere na-egosi anyị ihe ọ ka ga-eme n’ebe niile n’ụwa mgbe Alaeze Chineke ga-achịwa.—Jọn 5:28, 29.
Ndị mmadụ ga-ebi n’udo ma na-eme ezi omume ruo mgbe ebighị ebi: Mgbe Kraịst ga-achịwa ụwa, ajọ omume agakwaghị adị. Olee otú anyị si mara? Ọ bụ n’ihi na Jizọs ma ihe dị onye ọ bụla n’obi. Nke a ga-eme ka o nwee ike ikpe ndị ezi omume na ndị ajọ omume ikpe otú kwesịrị ekwesị. Ọ gaghị ekwe ka ndị na-ekweghị agbanwe omume ọjọọ ha biri n’ụwa ezi omume nke Chineke.—Abụ Ọma 37:9, 10; Aịzaya 11:3, 4; 65:20; Matiu 9:4.
Anyị elebala anya n’ihe ọma ole na ole Baịbụl buru n’amụma na ha ga-eme n’ọdịnihu. Mgbe Alaeze Chineke ga-achịwa ụwa, ‘udo ga-ezu ebe niile,’ udo ga-adịkwa ruo mgbe ebighị ebi. (Abụ Ọma 37:11, 29) Ihe niile na-akpatara ndị mmadụ nsogbu na ahụhụ agakwaghị adị. Obi kwesịrị isi anyị ike na ihe ndị a ga-eme n’ihi na Chineke sịrị: “Lee! Ana m eme ihe niile ka ha dị ọhụrụ. . . . Okwu ndị a kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa eziokwu.”—Mkpughe 21:5.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ahụhụ Niile Ga-akwụsị n’Oge Na-adịghị Anya